नेपालका नयाँ पारस !
काठमाडौँ,फागुन २९ नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का नाम नै काफि छ । नेपाललाई टी २० विश्कप देखी डिभिजन ५ बाट १ सम्म ल्याउने पारसनै हुन् । उनी अलराउण्डर खेलाडी हुन् । बिषेश त ब्याटिङ घुमाउने पारसको नाममा थुप्रै राष्टिय तथा अन्तराष्टि क्रिकेटमा कीर्तिमान रहेका छन् । जव सम्म पारस क्रिजमा रहन्छन् तव सम्म सबै क्रिकेट समर्थक र खेलाडीको जित्नेमा पुर्ण विश्वास हुन्छ । धेरै क्रिकेट समर्थकले त पारसको भरमा अडेको नेपाली क्रिकेट टोली भनेका छन् । ठुला ठुला सत प्रहार गर्ने खुबि रहेको पारसले लामो इनिग खेल्न नसके नेपाली ब्याटिङ पुरै धरमराउछ । धेरै पटक यस्तै भएको छ । धेरैले नेपालले नेपाली क्रिकेट खेल्न छाडेपछि कुन ब्याटम्यानले धान्न सक्ला भन्ने प्रश्न बारम्बार बहस गर्ने गरेका छन् । यस्तै प्रश्नको सहि जवाफ दिने खेलाडी बनेका छन् रोहित कुमार पौडेल । १५ बर्षिय कलिलो ब्याटम्यान अहिले परिपक्कता ब्याटिङ गरि रहेका छन् ।
यस्ले के बताउछ भने नेपाली क्रिकेटमा के साच्चै नयाँ पारस निस्केकै हुन् त ? नेपाललाई विश्वकप छनोट सम्म पुर्यान र एक दिवसिय मान्यता पाउने आसा जिवितै राख्न पौडेलको भुमिका निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । हिजो हंङकङं सँगको खेलमा नेपाल पराजित भएको भए एक दिवसिय मान्यता पाउने अवसर मात्र गुमाउन थिएन डिभिजन टुमा पुन घटुवा हुने थियो । हिजो पारस ११ रनमै आउट भए । कुनै समय नेपाल ६६ रन बनाउन ५ विकेट गुमाएको नाजुक अवस्थामा थियो । धेरैले त आज पनि खेल हार्नी भइयो भनेका थिए । तर रोहिले पुन जिम्मेदारीका साथ सोमपालसँग ८९ रनको अविजित पारी तथा ब्याक्तिगत उच्च रन ४८ बनाए । जस्ले खेल नेपालको पक्ष्यमा आयो । एक दिवसिय मान्यता पाउने आसा जिवितै राखेको छ । जुन पर्सि पिएनजीलाई हराउन सके चार बर्षको लागि एक दिवसिय मान्यता पाउने लगभग पक्का पक्कि हुने छ । तर उता नेदरल्यान्ड्स र हंङकङबीचको नजिजामा भरपर्ने छ । रोहितले हिजो जिताएको यो पहिलो पटक होइन । उनले डिभिजन टु को खेलमा केन्याले दिएको १७८ को लक्ष्य पक्ष्याएको नेपालको ब्याटिङ फेरी धरमरायाको थियो ।
८२ रन बटुल्न ५ विकेट खेर फालेको थिया । नेपालले हार्ने भयो भनेर धेरैले सोचेका थिए । तर आरिफ सेख र पौडेल ८७ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेपछि नेपालले खेल जितेन मात्र विश्वकप छनोट बलियो बनाएको थियो । जस्मा रोहितले ४७ रनको महत्पपूर्ण पारी खेलेका थिए । त्यस्तै डिभिजन ट ुमा उनी पारस पछि सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको सूचिमा उनी दोस्रो स्थानमा थिए । उनले मात्र ६ खेलमा १४२ रन बनाएका थिए । लिष्ट ए मा १० खेलखेलेका रोहित २९ को औसतमा ब्याटिङ गरेका छन् । जस्मा १६ चौका प्रहार गर्दै कुल २३४ रन बनाएका छन् । ३ पटक क्याच आउट हुदाँ २ पटक खेल फिनिसिङ गरेका छन् । रोहितले जुन रुपमा ब्याटिङ गरि रहेका छन् । नेपालका हिटम्यान बिनोद भन्डारीले खराब प्रर्दशन गरेपछि उनको स्थानमा छनोट कर्ताले उमेर समुह र घरेलु प्रतियोगितामा राम्रो फिनिसिङ र आक्रमक ब्याटिङ गरि रहेका रोहितलाई मौका दिएका थिए ।
उनी आएदेखी फिनिसिङ तथा आक्रमक ब्याटम्यानको अभावको महसुस भने हुन दिएका छैनन् । पछिल्ला १० खेलमा पारस पछि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सुचिमा नाम रोहितकै आउछ । धेरै क्रिकेट समर्थकले त भारतका आक्रमक तथा उत्कृष्ट ब्याटम्यान रोहित शर्माको उपनाम दिएका छन् भने कति नयाँ पारस खड्का भनेका छन् । साच्चै पौडेलले पनि त्यस्तै ब्याटिङ गरि रहेका छन् । त्यस्तै खराब फममा रहेका ब्याटम्यानलाई आराम दिदै नयाँलाइृ मौका दिनु पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले केहि राम्रा ब्याटम्यान खारब लय( फम ) बाट गुज्रिरहेका छन् । ती खेलाडीलाई पुन भने मौका दिए नेपाललाई नै घटा – हानी हुने देखिएको छ ।